Faa’idooyinka Guurka. « AYAAMO TV
1275 Views Date January 26th, 2014 time 8:40 am
Ma ahan wa si sahlan loo tilmaami karo ama loo wada sheegi karo Faa’idooyinkiisa oo dhan, laakiin aan ku soo koobno Dhowr qodob oo qofkasta u muuqda ama uu maskaxda ku hayo:-
.Guurku waa mida suura galiyey inay umadi taranto , oo hadii aysan jiri lahayn ma suurta galeen Farcan.
.Dadka muslimiinta ah waa sunne laga rabo inay la yimaadaan , Nabigeena (SCW) waxa uu yiri (Qofkii naca sunadayda Kama Mid ahan Umadayda)Culimada Qaarkeedna way qaybiyeen ,waxayna sheegen qayb waajib ah
.Waxuu guurku ilaaliya nasabka , oo hadii uusan jiri lahayn aadamigu sida xoolaha oo kale ayuu isku darman lahaa.
.Wuxuu qofka ka hor joogsadaa dambiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin sida dhilaysi (Zino) ku dhaco, taas oo ilaahay naga Xarimay, badelkeedana waxa ilaahay naagu ogolaaday inaan guursano guur xalaal ah, halkaasna aan baahideenii ku Gudano.
.Guurku waxa uu dajiyaa qofka , waxuuna ka dhigaa ruux masuul ah marka uu guursado wixii ka danbeeyana waxa uu isu Arkaa qof ay fududayn khaladaadkiisa ka dhaca isaga oo mar walba maskaxda ku haya waxa ka iman doona waxa uu Damco inuu sameeyo, Dadka qaar ayey maah maah waxa ay u tahay (Ama Guur Ama Geeri).